Imibuzo Evame Ukubuzwa | I-Hangzhou Dro Textile Co., Ltd.
Ngingashesha kanjani ukuthola intengo?
Sivame ukucaphuna kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokukuthola uphenyo.
Ngokuqokwa, i-MOQ yethu incike kunani lakho.Stock lingamukela i-oda elincane.
Ungakwazi yini ukwenza umklamo wethu noma ubeke uphawu lwethu kumkhiqizo?
Yebo, sinomnyango wethu we-R & D oqeqeshiwe, singenza umklamo wakho noma sibeke uphawu lwakho kumkhiqizo, sicela uthumele umklamo wakho noma uphenyo ku-imeyili yethu (iWhatsapp noma i-Skype) .Ungasithumela namasampula akho.
Isampula lingadinga ukukhiqizwa kwezinsuku ezi-5 ~ 15.
Uma uvele ukhethe isampula lethu esivele likhona. singakuthumela isampula ngosuku olulandelayo, singakuthumela isampula yamahhala futhi imali ekhokhwayo izokhokhiswa, kepha izobuyiselwa ngemuva kwe-oda lendawo.
Siyini isikhathi sokulethwa kwendwangu iMinimatt?
Izimpahla zidinga ukwenziwa izinsuku eziyi-10-30, kuncike ebuningini, futhi kuzoba ngumkhiqizo ngemuva kokuthola idiphozi.
Ngemali yesampula noma iyiphi imali encane, ungayithumela ku-akhawunti yethu ye-paypal.Kuma-oda ajwayelekile, samukela idiphozi engu-T / T 30%, ibhalansi okufanele ikhokhwe ngokuqhathaniswa nekhophi ye-B / L.
I-D / P, L / C nayo iyamukeleka, kepha-ke sithanda i-T / T, okulula kakhulu kithi sobabili.
Ngingavakashela ifektri noma ihhovisi lakho?
Impela, wamukela noma nini. Singahlela futhi ukuqoqa esikhumulweni sezindiza saseHangzhou Xiaoshan kanye nasesiteshini.